Yonsei University - Omumu ná mba ọzọ na South Korea
Yonsei University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1885
Students (ihe ruru.) : 39000
Echefukwala atụle Yonsei University
Idebanye aha na Yonsei University
Yonsei University meghere ọnụ ụzọ oge a elu-akụziri ihe karịrị otu narị afọ gara aga. Ọ nwere kemgbe ahụ pụta dị ka mba si n'elu onwe mahadum na kwubara n'etiti ụwa kasị mahadum. Ewu na anyị akụkọ ihe mere eme na omenala, Yonsei ga-agbalịsi ike a ọhụrụ n'ọdịnihu. Achọ ịchọpụta ebe anyị na ụdịdị dị iche iche nke civilizational mgbanwe, Yonsei ga na-edu na-esote 100 afọ ma na-ede a ọhụrụ akụkọ ihe mere eme.
Yonsei University na-now-abanye a ụwa nke chọrọ ileta ohere. N'oké ifufe nke oke mgbanwe, ngwa mmepe nke nkwurịta okwu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ akpan akpan na-reshaping mahadum ezi ihe ma na research gburugburu ebe obibi kpamkpam. The ina na-ebili n'ihi na a ọhụrụ mmụta nlereanya nke na akwado a ọgbọ na-atụ anya ibi ndụ na- 100 afọ. N'ihi ya, Yonsei University na-ịgbazigharị ya research, usoro agụmakwụkwọ, ma na-akwado ochichi iji na-edu otú na-atụ-eche echiche nnyocha na agụmakwụkwọ maka a na-agbanwe agbanwe otu.
Nanị inye ukwuu pụrụ iche ihe ọmụma, dị ka bụ omume na-ulo oru otu nke gara aga, ga-enwezi a egbu na-ụmụ akwụkwọ ndị ga-adị ndụ hụ atụgharị atụgharị a ọhụrụ narị afọ. Ọbụna N'ọgbọ a Amamịghe echiche karịrị mmadụ cognitive ike, Yonsei ga-aza oku na-aga azụlite okike nkà na naanị ike rụrụ site mmadu. Yonsei na-emepe emepe iche iche na mmemme iji azụlite creativity na a "na netwọk ọha mmadụ." Na oge a na oge, mgbe nile interactions nke dị iche iche ebe nke ihe ọmụma na nka ewu netwọk na enye ụzọ kpamkpam ọhụrụ iche nke ihe ọmụma na n'ọnọdụ.
Ọmụmaatụ, physics ịka tiori na oru nkà nke nanotechnology na-agbasa mgbochi n'etiti ọcha sayensị na etinyere technology. Mmekota n'etiti ndị Humanities na eke na sayensị emeela ka innovations ya na ha na mbụ-apụghị ichetụ n'echiche. Ọ bụ ya mere ihe dị mkpa na ngalaba imeri abahade na-agba ume mkparịta ụka n'etiti ndị nnyocha nke ndị ọzọ ubi. Na njedebe a, M kwere na mkpa nke Ọrụ "extelligence,"Mma nke ọgụgụ isi site na njikọ nke na uzọ ọzọ na-anaghị asọpụrụ-egbuke egbuke echiche. Creativity abụghị nanị inwe ike ime ihe intangible tangible, kama bu inwe ike ime ihe na-ama bụ na-eme ka ihe dị ọhụrụ site cognitive ụka n'Ịntanet.
N'ọdịnihu, mmetụta ọmịiko na-ekere òkè ga-dị nnọọ ka mkpa dị ka ihe echiche. Yonsei ga ụgbọala mgbalị iji lebara ihe dị otú ahụ "ọmịiko mmadụ" site n'ịzụ isi na-ekpe ekere òkè. N'ihi na nke a otu nke ga-eme n'ọdịnihu, ịchụso ihe onwe onye uru ga-anọchi nkwanyerịta ùgwù na ịdị na n'ọṅụ nakwa n'iru újú na ndị ọzọ; otu ga-ịgbanwee n'ebe ya "nlanarị nke ike kwere dịrị" ụzọ iche echiche na-ele anya n'ebe onwe-okwu, na ihe masịrị onye ga-echigharịkwuru collectivism. The founders nke Yonsei kụrụ uru nke na-aga ihe karịrị nanị na-ekere òkè ihe onwunwe ikike ndị ahụ site n'ikere òkè-edu ndú. Ịma aka na ndị e kere eke, nkwurịta okwu na mmetụta ọmịiko, nkekọrịta na nchebara echiche, n'agbụ na nkwanye ùgwù. Ndị a bụ ụkpụrụ na anyị na-ebu anyị dị ka ndị ndú nke ga-eme n'ọdịnihu, na ga-eme ma na-akwado dị ka Yonseians. Jikọọ na Yonsei na-eduga n'ụzọ ga-eme n'ọdịnihu.
College of Life Science na Biotechnology
College of Science na Education
Open Isi, University College
Underwood International College(UD Freshman, ASD, ọzọkwa, iSSD, ISED)
Global Program - Nga Major Program
United Ukpep School of Theology
Ukpep School of Information
Ukpep School of Communication na Arts
Ukpep School of Social Welfare
Ukpep School of Business Administration
Ukpep School of Journalism na Mass Communication
Ukpep School of Human Environmental Sciences
Ukpep School of Government na Business
Ukpep School of Health na Environment
Ị chọrọ atụle Yonsei University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Jikọọ na-atụle nke Yonsei University.